Banky sary: ​​ny toerana malalaka sy maimaim-poana indrindra amin'ny taona 2019 | Avy amin'ny Linux
Banks amin'ny sary: ​​tranokala maimaim-poana sy maimaim-poana tsara indrindra amin'ny taona 2019
Ny banky sary an-tserasera dia trano fitehirizana entana, fivarotam-boky, toerana fitahirizana sary, sary sokitra, sary, izany hoe sary amin'ny ankapobeny. Matetika ireo dia ampiasaina ho rakitra na loharano fanombohana hetsika maro, satria amin'izao fotoana izao sy amin'ny fitsipika, dia manolotra ny fahafaha-mamoaka, manadihady ary misintona, malalaka na am-bola, sarin'ireo mpampiasa an-tapitrisany rehetra izy ireo. izao tontolo izao.
Ny tena fampiasan'izy ireo na ny tanjon'izy ireo dia ny ahafahan'izy ireo ampiasaina ho mpanome sary ho an'ny fanomanana ny atiny multimedia sy multimedia., an-tserasera na tsia, na amin'ny haino aman-jery nomerika toy ny tranokala sy bilaogy, ary koa amin'ny haino aman-jery toy ny magazine, gazety, ankoatry ny haino aman-jery na endrika hafa.
Ny ankamaroan'ny banky sary ankehitriny dia mividy na mahazo ary mampiantrano malalaka na misy fepetra, ny sarin'ny tompona na ny mpamorona (mpaka sary, mpanakanto, vondrona). Ary avy eo, amin'ity dingana ity, dia azony avokoa na ny ampahany amin'ny zon'ny fananahana sy ny fampiasana ny sary manokana. Manana azy ireo malalaka, miaraka amina fetra na amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola, ho an'ireo mpitsidika anao, mpampiasa anao na mpikambana.
1 Banky sary tsara indrindra ho an'ny taona 2019
1.1 Banky sary maimaim-poana sy maimaim-poana
1.5 Sary Public Domain
1.7 Sary stock maimaimpoana
1.8 Sary maimaimpoana
1.12 Banky sary hafa ilaina sy fanta-daza
1.13 Ireo mahita sary
Banky sary tsara indrindra ho an'ny taona 2019
Banky sary maimaim-poana sy maimaim-poana
Androany, misy banky sary maro an-tseraseraNy sasany efa teny an-tsena efa ela, ny sasany vao haingana. Ny sasany dia avy amin'ny sokajy sary tokana ihany, ny sasany kosa manana sokajy vitsivitsy na maromaro misy. Ny hafa dia sary maimaimpoana sy maimaimpoana fotsiny, ary ny hafa manome sary fotsiny miaraka amin'ny fandoavam-bola, ny hafa kosa samy manana ny fomba maodiny.
Ity misy lisitra tsara momba ny banky sary maimaimpoana sy maimaim-poana:
vaky Tranonkala amin'ny teny anglisy sy portogey izy io. Mikaroha sary mampiasa lamina teny. Mitondrà vondron-tsary vitsivitsy na fanasokajiana vitsivitsy avy amin'ny "Sokajy malaza" sy "Collections". Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny rehetra dia natao ho an'ny besinimaro ary maimaim-poana. Izy io dia tranonkala noforonin'ireo mpaka sary kanadiana 2, manolotra tranokala feno sary avo lenta avy amin'ireo mpaka sary samihafa manerantany.
CC Search Tranonkala anglisy ihany. Mikaroha sary mampiasa lamina teny. Tsy mitondra vondron-tsary na fanasokajiana izy io fa manana sivana fikarohana izay misy "karazana lisansa", "tranokala loharano" ary "mpamorona". Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny rehetra dia natao ho an'ny besinimaro ary maimaim-poana. Izy io dia tranokala noforonin'ny fikambanana Creative Commons monina any Etazonia. Manana mavitrika koa izy io interface taloha mbola.
foter Tranonkala anglisy ihany. Mikaroha sary mampiasa lamina teny. Izy io dia mitondra vondrona sary na fanasokajiana vitsivitsy avy amin'ny «Sokajy». Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny rehetra dia natao ho an'ny besinimaro ary maimaim-poana. Izy io dia tranokala miorina any Etazonia, izay manolotra tranokala feno sary tsara kalitao amina fanapahan-kevitra telo samihafa.
Sary Public Domain
Sary Public Domain dia tranokala misy fiteny maro izay misy ny Espaniôla. Mikaroha sary mampiasa lamina teny. Izy io dia mitondra vondrona sary na fanasokajiana maro amin'ny alàlan'ny «Sokajy» na «Fizarana». Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny rehetra dia natao ho an'ny besinimaro ary maimaim-poana. Izy io dia tranokala miorina any Angletera, izay manolotra karazana sary maimaimpoana tsara kalitao ary amina fanapahan-kevitra tsara kokoa ho an'ny fandoavam-bola.
PNGImg Tranonkala anglisy ihany. Mikaroha sary mampiasa lamina teny. Izy io dia mitondra vondron-tsary na fanasokajiana maro avy amin'ny «Sokajy» sy «Fizarana». Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny rehetra dia natao ho an'ny besinimaro ary maimaim-poana. Izy io dia tranokala iray manolotra sary maroloko sy clipart misy kalitao maimaimpoana saingy amin'ny endrika .png ihany, indrindra ho an'ny famolavolana tranonkala sy ny famolavolana amin'ny ankapobeny.
Sary stock maimaimpoana
Sary stock maimaimpoana Izy io dia tranokala misy fiteny maro tsy misy Espaniola. Tsy mamela ny fitadiavana sary mampiasa lamina teny. Mitondrà vondrona sary na fanasokajiana maro an'isa amin'ny alàlan'ny «Sokajy». Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny rehetra dia natao ho an'ny besinimaro ary maimaim-poana. Izy io dia tranokala miorina any Russia, manome sary marobe maimaimpoana manana kalitao avo lenta sy vahaolana tsara.
Sary maimaimpoana dia tranokala misy fiteny maro izay misy ny Espaniôla. Mikaroha sary mampiasa lamina teny. Izy io dia mitondra vondron-tsary na fanasokajiana maro an'isa amin'ny alàlan'ny «Sokajy» sy «Fizarana». Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny rehetra dia natao ho an'ny besinimaro ary maimaim-poana. Izy io dia tranokala miorina any Etazonia, izay manolotra sary marobe maimaimpoana kalitao tena tsara ary amina fanapahan-kevitra 5 efa voafaritra mialoha.
Freepik Tranonkala amin'ny teny espaniola izy io. Mikaroha sary, volo, sary stock, fisie PSD sy kisary mampiasa lamina teny. Izy io dia mitondra vondron-tsary na fanasokajiana maro an'isa amin'ny alàlan'ny «Sokajy» sy «Fikarohana malaza». Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny dia maimaim-poana sy ampiasain'ny besinimaro ary aloa amin'ny serivisy premium. Izy io dia tranokala miorina any Etazonia, izay manolotra karazany maro miaraka amina kalitao tena tsara.
Gratisography Tranonkala amin'ny teny espaniola izy io. Mikaroha sary mampiasa lamina teny. Izy io dia mitondra vondron-tsary na fanasokajiana kely avy amin'ny «Sokajy». Tsy mila fisoratana anarana ny fampiasana ny serivisy, ary ny sariny dia maimaim-poana sy ampiasain'ny besinimaro ary aloa amin'ny serivisy premium. Izy io dia tranokala miorina any Etazonia, izay tsy manolotra karazany marobe ankehitriny ary ireo sary misy dia tonga amina fanapahan-kevitra efa voafaritra ihany.
Kaboompics Tranonkala amin'ny teny anglisy izy io. Mikaroha sary mampiasa lamina teny. Izy io dia mitondra vondron-tsary na fanasokajiana maro an'isa amin'ny alàlan'ny "Sections" ary manana sivana araka ny "Sokajy". Tsy mila fisoratana anarana ianao hampiasana ny serivisy, ary ny sarinao dia maimaim-poana sy ampiasain'ny besinimaro. Izy io dia tranokala miorina any Etazonia, izay mamela anao izao hisintona ireo sary misy amin'ny fanapahan-kevitra efa voafaritra 2 sy iray azo ampifanarahana.
Banky sary hafa ilaina sy fanta-daza
Ity misy lisitra fanampiny an'ny tranokala Image Bank izay mahaliana ny mikaroka, mitsidika ary mizaha:
Fahafatesana amin'ny tahiry
Sary sakafo maimaim-poana
Ny tahirim-bola MMT
Ireo mahita sary
Misy tranokala izay tsy mety ny Banks Image fa mpizaha sary hita ao amin'ny Banks Image. Anisan'izany ireto:
Azo antoka fa manome tombony lehibe antsika ny banky sary, indrindra ho an'ireo izay mila matihanina amin'ny tetikasanay, lahatsoratra na atiny haino aman-jery mba hampiasa sary, maimaim-poana sy maimaim-poana na amin'ny tsy fisian'ny fandoavam-bola.
Koa satria na inona na inona novolavolainay na ovainay, ny filàna isan'andro sary vaovao dia mahatonga ireto tranonkala ireto ho loharano tena mety hahita zavatra mifandraika amin'ny lohahevitray., ary miaraka amin'ny tombony fanampiny izay maro amin'ireny, na dia malalaka sy maimaim-poana aza dia manana kalitao avo lenta sy avoakan'ny matihanina, izay ahafahantsika manaitra ny mpamaky, ny mpanjifantsika na ny mpampiasa aminay ny atiny sy ny vokatra vita aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Banks amin'ny sary: ​​tranokala maimaim-poana sy maimaim-poana tsara indrindra amin'ny taona 2019
Alex Polo dia hoy izy:
Misaotra betsaka indrindra! Miara-miasa amin'ny horonan-tsary ihany koa aho ary hitako fa ity tranonkala ity dia tiako maimaim-poana, antsoina hoe https://Gifing.com, manana atiny samy hafa miaraka amin'ireo mpilalao sarimihetsika ary amin'ny endrika mitsangana ho an'ny tambajotra sosialy, efa nampiasaiko betsaka izy io, antenaina fa hanampy anao io
Valiny tamin'i Alex Polo
Miarahaba anao Alex! Misaotra tamin'ny hevitrao. Ny banky vidéo dia tsy dia fantatra loatra, ka fandraisana anjara tena tsara.
LMMS, fitaovana fanaovana mozika, dia mahazo fanavaozana vaovao aorian'ny 4 taona
Tonga ny ROSA Enterprise Desktop X4 miaraka amin'i Kernel 4.15, KDE4 ary maro hafa